Imfihlo Yethu Yokusebenzisa Injini Yokucinga | Martech Zone
Imfihlo Yethu Yokusebenzisa Injini Yokucinga
NgoLwesithathu, July 28, 2010 NgoMgqibelo, Septhemba 19, 2015 Douglas Karr
Nasi isibonelo esijwayelekile sezibalo zokuhlelwa kwamagama angukhiye wokuncintisana kwelinye lamakhasimende ethu:
Umugqa ngamunye umele igama elingukhiye, kanti i-Y-Axis yizinga labo njengoba liqoshwe ngu AmaLebhu weGunya. Ngaphansi kwezinyanga ezi-2 kungenile, futhi sesizobathola ekhasini 1. Zingakapheli izinyanga eziyisithupha, sizoba nenani elithile labo. Ngamakhasimende angaphezu kwe-6, sazi ngokuphelele ukuthi kudinga ini ukuthola indawo ibekwe kahle. Elinye lamakhasimende ethu amakhulu manje selibeka # 20 kwamathathu wokuncintisana aphezulu embonini yabo, kanye namanye amagama ambalwa asekhasini 1 futhi ayathuthukiswa.
I-SEO esizeni akuyona imfihlo. Nakhu esikwenzayo:
Qiniseka analytics ifakwe kahle nokuthi sithola izibalo ezinhle kokuthi isisekelo sini esisebenza kuso. Siqinisekisa amagama angukhiye ashayela ithrafikhi empeleni ahlobene nebhizinisi esifuna ukulenza kusayithi. Siphinde sizame ukufaka ukuguqulwa kokulinganisa… kwesinye isikhathi ithrafikhi oyitholayo akusho ukuthi ushayela imali yebhizinisi lakho. Kubalulekile ukuhlukanisa lezi zinto ezimbili.
Yenza ucwaningo lwamagama asemqoka usebenzisa I-Adwords, Semrush futhi I-SpyFu ukuthola ukuqonda ngamagama asemqoka esikuwo njengamanje, lokho esingakleliswa ngakho, nokuthi umncintiswano usezingeni lini. Lokhu kuzosinikeza imigomo okumele siyikhombe. Sikhomba imigomo esivele sinayo isikhundla salokho esaziyo ukuthi singakwazi ukungena ezingeni eliphakeme… ngethemba ukuthi # 1 usezingeni.
Qiniseka ukuthi indawo yesayithi abaphathi kuhlonyelwe isu langempela elingukhiye negunya esifuna ukuthi likuthole. (isibonelo: imikhakha yomkhiqizo esifuna ukuyihlela kahle ixhunyaniswe nokuzulazula kwesiza noma ikhethwe ngezixhumanisi ezinhle ngaphakathi kokuqukethwe kwekhasi lasekhaya). Ngemuva kwezinguquko zakamuva ze-algorithm yakwaGoogle, sicindezele amaklayenti ethu ukuba 'acabale' laphaya amasayithi ukuze abanzi kunokuba ajule. Lokho kusho amakhasi wesibili amaningi, kepha ukugcina amakhasi ezingeni lesithathu nangaphezulu kube ubuncane obungenalutho.
Qiniseka ukuthi isiza sine- amarobhothi ifayela, Amamephu amasayithi, futhi ibhaliswe ne- webmasters kusuka ezinjinini zokusesha ezinkulu ngasinye ukuze sikwazi ukuqapha ukuthi injini yokusesha ikuthola kanjani futhi ikubeka kokuqukethwe, kanye nokukhomba noma yiziphi izinkinga.
Qiniseka ukuthi isayithi linamakhasi noma ibhulogi inamaposi akhuluma ngqo nefayili le- Amagama angukhiye noma amagama afanayo (uma wenza ukusesha ngegama elingukhiye, bheka ezansi kwekhasi lemiphumela yenjini yokusesha ukuthola amagama afanayo). Lokhu kusho ukusebenzisa igama elingukhiye ekuqaleni kwezihloko zekhasi, ekuqaleni kwezincazelo ze-meta, ezihlokweni, ekuqaleni kokuqukethwe, nangaphakathi kokuqukethwe kwekhasi (ngaphakathi kwamathegi aqinile noma anesibindi).
Amanye amaklayenti anokuhle Igunya (okusho ukuthi iGoogle ibabeke phezulu ngokususelwa kumlando wesizinda sabo maqondana namatemu okusesha abebencintisana nawo). Abanye abanalo igunya ngakho kufanele sishaye amasu akhulisa igunya labo. Lokhu kufezwa ngokuqinisekisa ukuthi zixhunywe kwezinye izizinda eziyinhloko ezikleliswa kahle ngamagama athile angukhiye noma izingxenye zemboni. Lokhu kuthatha ithani lomsebenzi.
Okokugcina… siqinisekisa ukuthi bayaqhubeka nokuthola ukuguqulwa. Lokhu kwesinye isikhathi kudinga amasu wokusebenzisa kahle, ukuklama ukubizela esenzweni, nokwenza ngezifiso amakhasi okufika. Kodwa-ke, siyazi ukuthi isikhundla nethrafikhi akusho lutho uma empeleni singashayeli amadola kulayini webhizinisi.
Ukuphishekela amabhulogi ezivakashi, ukushicilela ukukhishwa kwabezindaba, ukuphawula ngenkuthalo noma ukubamba iqhaza kumasayithi omphakathi ahambisana negama elingukhiye kuyadingeka. Yilapho lapho usesho nemithombo yezokuxhumana qala ukugqagqana. Ukukhuthaza okuqukethwe kwakho kuba yikhiye… hhayi nje kuphela ukushayela kwezimoto kepha nokushayela izixhumanisi emuva kusayithi lakho.
Vele, konke lokhu kuzwakala kulula… kepha akunjalo. Ukuba namathuluzi afanele, ukuqonda ukuthi ungakusebenzisa kanjani analytics futhi ubheke amazinga wokuguqulwa, futhi ukwazi ukucacisa zonke izingcezu zedatha - analytics, umphathi wewebhu, amazinga, amagama angukhiye, njll isenzo esinzima sejuggling. Amakhasimende ethu asikhokhela ukuthi senze lokho nje… futhi sibafundisa futhi kule nqubo.
Abanye abafana bangaphakathi nabanye abeluleki be-SEO baphikisana ngamasu ethu… kepha kunzima ukuphikisana uma uneminyaka engu- # 1. 🙂
Tags: ukusebenzisa ngokugcwele injiniseoimfihlo ye-seo